Ciidanka Badbaado Qaran oo laga saarey difaacyadooda | KEYDMEDIA ONLINE
Arintan ayaa timid kadib heshiis shalay lagu gaarey Muqdisho oo dowladda la gashay dhinaca kasoo horjeeday muddo-kordhinta Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa galabta laga saarey qeybo kamid ah Muqdisho Ciidanka Badbaado Qaran, oo ku sugnaa dhowr degmo oo ku dhaw Madaxtooyadda Villa Somalia.
Ra'iisul Wasaare Rooble oo ay wehliyeen xubnaha Guddiga xalinta dagaalkii ka dhacay Caasimadda iyo Xildhibaanno ayaa kormeeray goobihii ay dhufeysyadda ka qoteen degmooyinka Hodon, Howlwadaag, Kaaraan iyo C/casiis.
Waxaa la isku furay magaaladda, iyadoo Ciidanka Badbaado Qaran ay ka baxeen Siigaale, Barmoodo, Miranaayo iyo aagag kale oo Isgoyska Dabka uu ku jiro, kaasoo difaac uga jireen labadii Todobaad ee lasoo dhaafay, iyagoo kahor yimid kaligii-taliye Farmaajo inuu xukunka sii daba dheeraysto.
Arintan ayaa ku timid heshiis shalay la gaarey oo kasoo shaqeeyay guddi farsamo oo Rooble magacaabey maalin kahor, kaasoo ka koobnaa xubno dowladda iyo dhinaca kale ka kooban, kuwaasoo ugu dambeyn ku guuleystay qaadista Ciidanka Badbaado Qaran, oo dib loo celiyay saldhigyadoodii hore.
Madaxweyniyayaashii hore Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif oo ay wehliyaan Qoor-Qoor iyo Guudlaawe ayaa qeyb ka qaatay mira-dhalka dedaallada lagu nabadeynayo Caasimadda, islamarkaana lagu soo afjaray tabashadda Ciidanka Badbaado Qaran.
Qodobada Heshiiska waxaa kamid ah in Ciidanka aan laga saarey Liiska, sidoo kalena aan waxba laga jaran xagga mushaarka iyo darajooyinka, iyadoo aan oloo raacan doonin wixii dhibaato ah ee ka dhashay halgenkii looga hortagay muddo-korarsiga Farmaajo.
Dagaalkii ka dhacay Muqdisho, sida QM ay sheegtay waxaa ku barakacay dad shacab ah oo gaaraya inta u dhaxaysa 60,000 illaa 100,000 oo qof, kuwaasoo wali aan dib ugu soo laaban xaafadahooda.
Xaaladdii cakirnayd ee Muqdisho waxay u muuqataa inay soo dhamaatay, waxaana lagu tilmaamay tallaabadan mid loo qaadey dhanka nabadda iyo xasiloonidda, taasoo horseedaysa inay doorashadda si nabdoon ku qabsoonto.